Mmetụta ahụike nke ọgwụ ọjọọ na ịba àgwà Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ
Ndị ọkachamara ahụ ike na-akọ na ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ọrịa psychiatric na neuro-developmental na ndị na-eto eto taa. Ihe nchoputa na nchoputa di iche iche na enweghi ike ime ka mmadu nwee mmekorita ya na intaneti. Nke a gụnyere ọ bụghị naanị n'ịgba chaa chaa na ịgba chaa chaa, kama ịntanetị. Mụtakwuo maka Ụlọ Akwụkwọ Ntuziaka Maka Ụgwọ Ọrụ maka ndị ọkachamara ahụike.
Omume ahụ ike na-akpali agụụ mmekọahụ na-emetụta ndị ikom karịsịa. A bipụtara na nso nso a Review site Ịhụnanya et al. ekwu
"N'ihe banyere ntanetị Intanet, nchọpụta neuroscientific na-akwado nkwenkwe na usoro ihe ndị dị na ya dị ka ọgwụ ọjọọ."
Ozi ọma ahụ bụ na site n'ichetakwuo otú ụbụrụ si agbanwe n'ihe metụtara ahụmahụ, ọtụtụ ndị nwere ike ịlaghachi.
Wardlọ Ọrụ Rekwụ introdugwọ ahụ na-ewebata ọtụtụ ụzọ anyị nwere ike isi metụta ọdịmma anyị site na iji ịntanetị na karịsịa ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ ịntanetị. Iri ihe nlere nke intaneti nwere ike gbanwee ụbụrụ, gbanwee ahụ mmadụ ma mee ka ndị mmadụ nwee ike ịmalite inwe agụụ mmekọahụ na-enweghị nsogbu gụnyere mmadụ riri ahụ. N’ikwu ya nkenke, ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na-emetụta ahụ ike.
Izi ezi na enweghị aha
Anyị na-enyekwa ọtụtụ akụ maka ịkwado nghọta gị gbasara nsogbu ahụike. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịmatakwu maka ọmụmụ ihe anyị maka ndị ọkachamara gbasara Mmekọ na Mmekọahụ Mmekọahụ pịa Ebe a.